Ukumelana Nolwando EDominican Republic | Incwadi Yonyaka Ka-2015
“Zonke Iintlobo Zabantu Zisindiswe”
UYehova uthanda ukuba “zonke iintlobo zabantu zisindiswe zize zifikelele elwazini oluchanileyo lwenyaniso.” (1 Tim. 2:4) Ngenxa yoku, amaNgqina kaYehova aseDominican Republic aye azimisela ukufikelela bonke abantu abakweli lizwe, kuquka nabo babanjiweyo.
Ngo-1997 oovulindlela abakhethekileyo ababini babesiya kwiNtolongo iNajayo eseSan Cristóbal, njengoko beqhele ukwenjenjalo veki nganye. Apho badibana noGloria, ibhinqa laseColombia elineminyaka eyi-23, elalibanjelwe ukuthubelezisa iziyobisi. Lalisoloko lincokola nomnye udade owayebanjwe ngokungekho mthethweni. Ukuze baphendule imibuzo kaGloria, abazalwana bamphathela incwadi ethi Ukuqiqa NgeZibhalo nezinye iincwadi. Indlela awayekuthanda ngayo ukufunda yosulela namanye amabanjwa, ngoko ayesiya esiba maninzi amabanjwa atyelelwa ngaba bazalwana.
Inyaniso yabutshintsha ngokupheleleyo ubomi bukaGloria, kangangokuba ngo-1999 waba ngumvakalisi ongabhaptizwanga. Nyanga nganye wayeshumayela iiyure ezingaphezu kweziyi-70 kwintolongo awayevalelwe kuyo, ibe wayeqhuba izifundo ezinenkqubela ezintandathu. Ngo-2000, wafaka isicelo kumongameli sokuba amxolele kwityala lakhe, waza waxolelwa ngenxa yendlela awayeziphethe ngayo. Wakhululwa waza wagoduswa wasiwa eColombia. Kungekudala ebuyile, ngo-2001, wabhaptizwa nakuba intsapho yakhe yayingafuni nokuva.
UGloria Cardona wafunda inyaniso ejele. Ngoku yena nomyeni wakhe ngoovulindlela
Emva kokuba uGloria ebhaptiziwe, waba nguvulindlela. Watshata nomdala, yaye bobabini ngoovulindlela abathe ngxi. Ngoku bakhonza kummandla ofuna abavakalisi abangakumbi eColombia. UGloria uye wanceda izifundo zakhe ezininzi zazahlulela zaza zabhaptizwa. Uthi uyamtyala uYehova yaye eyona ndlela yokumhlawula kukufundisa abanye inyaniso—njengokuba naye wafundiswayo.
Amava kaGloria abonisa ukuba kwaneentsimbi ezingqindilili zentolongo azikwazanga ukuthintela amabanjwa ekufundeni inyaniso esindis’ ubomi. Abameli besebe baya kucela imvume kumagosa eSebe Lezentolongo ukuze abazalwana banikwe ithuba lokuya nakwezinye iintolongo ukuze baqhubele amabanjwa angakumbi izifundo zeBhayibhile. Ngoko, kwanikwa abazalwana abayi-43 noodade abayi-6 imvume yokuya kufundisa kwiintolongo eziyi-13.
“Yandisa Iintambo Zentente Yakho”
Yathi iphela iminyaka yee-1900, babe abavakalisi baseDominican Republic beyi-21 684, kumabandla ayi-342 yaye kuqhutywa izifundo eziyi-34 380. Ababekho kwiSikhumbuzo babeyi-72 679. Ngenxa yolo lwando, abantu bakaYehova baye abaphozisa maseko ukwamkela amazwi kaIsaya athi: “Yenze ibe banzi ngakumbi indawo yentente yakho. Kwaye mabawolule amalaphu entente yomnquba wakho ozukileyo. Ungathinteli. Yandisa iintambo zentente yakho.”—Isaya 54:2.
Enye yeengxaki yayikukufumana iHolo yeNdibano eyayiza kwanela bonke abavakalisi ababesanda. Ngo-1996 kwagqitywa ukwakhiwa iHolo yeNdibano eyayikufuphi nesebe laseSanto Domingo. Yayisetyenziswa ngabavakalisi abahlala esixekweni nakwiindawo ezikufutshane. Yona iHolo yeNdibano eseVilla González, eyayisetyenziswa ngabavakalisi abahlala esixekweni yayifuna ukulungiswa okanye ichithwe kuze kwakhiwe entsha.
Ngo-2001, iQumrhu Elilawulayo lavuma ukuba kwakhiwe iHolo yeNdibano eyayinokuthwala abantu abayi-2 500 kwisiza esiseVilla González. Abazalwana bavuya ngokwenene bakuva ukuba kuza kwakhiwa nendawo ekuza kuqhutywa kuyo iSikolo Sokuqeqesha Abalungiseleli (ngoku esithathelwe indawo siSikolo Sabavangeli BoBukumkani). Yayiza kuba kufuphi neHolo yeNdibano, ibe neendawo zokuhlala, iklasi ekuza kufundwa kuyo, indawo egcina iincwadi, igumbi lokupheka nelokutyela. Ngo-2004, uTheodore Jaracz weQumrhu Elilawulayo, wanikezela ezo zakhiwo zitsha. Ukususela ngoko, sekuphumelele iiklasi eziyi-14 kweso sikolo.